सेनाको हतियार स्वदेशमै हतियार उत्पादन गरिने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सेनाको हतियार स्वदेशमै हतियार उत्पादन गरिने
प्रकाशित मिति १ बैशाख २०७६, आईतवार २१:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भर बनाउन हतियार, गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, उपकरण र लत्ताकपडा मुलुकभित्रै उत्पादन गरिने भएको छ ।
प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । नीतिमा सेना र प्रहरीको क्षमता र व्यावसायिकता वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले स्वीकृत गरिसकेको सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न छलफल भइरहेको छ ।
सुरक्षा निकायको पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । पुनर्संरचना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक जटिलता र भूराजनीतिलाई ध्यान दिइने छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालमै अत्याधुनिक हतियार प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यसका लागि उनले जर्मनीसँग सहकार्य अघि बढाएका थिए । उनले राजधानीको सुन्दरी जल क्षेत्रमा जग्गा छुट्याएका थिए ।
स्वदेशमै हतियार उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सेनालाई प्रशिक्षण दिने योजना वीरेन्द्रको थियो । योजना नसकिँदै उनको वंशनाश भयो । त्यसपछि यो काम अलपत्र छ ।
नीतिमा सुरक्षा निकायलाई व्यस्त राख्न र चेन अफ कमान्डमा हिँडाउने व्यवस्था छ । अधिकांश मुलुकमा सेनालाई विकास परियोजनामा लगाउने प्रचलन छ । सुरक्षा नीतिमा पनि सुरक्षा निकायलाई विकास निर्माणका काममा व्यस्त बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।
सरकारले मुलुकभित्र सीमा सुरक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुरक्षा निकायलगायतले प्रयोग गर्ने हतियारको मापदण्ड तोक्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राजनीतिक नेताहरूले विदेशीसँग गर्ने भेटघाटलाई सुरक्षा परिषद्ले नियमन गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षामा योगदान दिँदै आएको नेपाली सुरक्षा निकायलाई थप चुस्त पार्नुपर्ने प्रस्ताव नीतिमा छ ।
‘खेल जस्तै स्वछ हुनुपर्छ राजनिति’
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आबद्ध भएर लोकप्रिय बन्दै गएको मार्सल आर्टस् सम्बन्धी खेल तङ्ग–इल…
अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीको बिचल्ली, जिम्मेवार को ?
-नेपाली दूतावासका अनुसार विभिन्न तह र विषय अध्ययन गर्न ३५ हजार नेपाली अस्ट्रेलिया पुगेका छन् ।
-सिड्नी र ब्रिस्बनमा सञ्चालित अस्ट्रेलिन…
काठमाडौं । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भएका अधिकांश मेसिन बिग्रिएर बेहाल अवस्थामा पुगेको छ । विपन्न जनताले सर्वसुलभ रकममै स्वास्थ्य…
सानैमा लुकेर आमा नाचेकी हेर्थिन् माधुरी
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ‘डान्स क्वीन’का रुपमा चिनिन्छिन् । एक समय माधुरी भन्ना साथ डान्सको कुरा…
रिमालको कार्यशैलीले पूर्वएमालेका यि नेताहरू प्रचण्डको समूहमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पूर्वएमाले पृष्ठभूमि भएका धेरै नेताहरू पलायन हुने…
अमेरिकाबाट नेपाल आएर रामप्रसाद खनालले गाए पञ्चेबाजाको मन छुने गीत, रिलिज भयो दुलाहा दुलहीको भिडियो ! 222 views
भूकम्प आउँछ भनेर आतंक फैलाउने ‘ज्योतिष’ छुटे 23 views